पुष्पलाल बाँचिरहेका भए...
सन्दर्भ : ९७‍औँ पुष्पलाल जन्मदिन
विभूति शर्मा काठमाडौं, १५ असार
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले सात दशक पार गरिसकेको छ । यसबीचमा नेपालको राजनीतिमा धेरै पानी बगेको छ । विभिन्न शासन व्यवस्थाको अनुभव नेपालीले गरिसकेका छन् ।
राणाकालमै सुरु भएको राजनीतिक आन्दोलन जब सङ्गठित रूपमा अघि बढ्न थाल्यो, तब राजनीतिक दलहरूको जन्म हुन थाल्यो । यसै क्रममा विक्रमको २००० को दशकमै नेपालमा प्रजातन्त्रवादी धारको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो भने वामपन्थी धारको नेतृत्व गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ।
हो, यही वामपन्थी धारको पार्टी नेकपाका संस्थापक हुन् पुष्पलाल श्रेष्ठ ।
पुष्पलालको जन्म १५ असार १९८१ मा रामेछापमा भएको हो । उनी पिता भक्तलाल र माता तुलसीकुमारीका माहिला छोरा हुन् । उनका पिता भक्तलाल पनि राजनीतिसचेत थिए । २००९ सालमा भएको अखिल नेपाल न्यून वैतनिक सरकारी कर्मचारीहरूको हडतालमा भक्तलाल एक्सन कमिटीका अध्यक्ष बनेका थिए ।
उसो त उनका दाजु गंगालाल नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अविष्मरणीय र अमर नाम हो । १९९७ सालमा अन्य ३ जनासहित देश र जनताको मुक्तिका निम्ति प्राण उत्सर्ग गरेका गंगालाल अमर शहीद हुन् ।
१९९७ सालमा दाजु गंगालालसहित अन्य ३ जनालाई तत्कालीन जहानियाँ राणा शासकले हत्या गरेपछि पुष्पलालले १९९८ सालमा नै केही राजनीतिसचेत र विद्रोहचेत भएका साथीहरूसँग मिलेर नेपाली प्रजातान्त्रिक संघ गठन गरेका थिए ।
उनीहरूमा विद्रोहचेत कतिसम्म थियो भने संघमा रहेका हरेक सदस्यले आआफ्नो रगतले प्रतिज्ञापत्रमा सही गरेर पार्टीमा लाग्नुपर्ने नियम थियो । संघले राणाशासनको विरोध गर्ने, विद्यालयहरू खोलेर विभिन्न खालका तालिम दिन्थ्यो ।
पुष्पलालले नेपामा मात्र नभएर भारतमा पनि राणाविरोधी क्रियाकलाप बढाए । पुष्पलालले १९९७ सालदेखि बन्दी जीवन बिताइरहेका तत्कालीन विद्रोही समूह नेपाल प्रजा परिषद्का नेताहरूसित गोप्य रूपले सम्पर्क गरेर बन्दी नेताहरूको नेलसहितको फोटो भारतको पटनाबाट प्रकाशन हुने ‘जनता’ पत्रिकामा प्रकाशन गराए ।
२००४ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले नागरिक अधिकारका लागि गरेको आन्दोलनको नेतृत्व पुष्पलाल श्रेष्ठ, शम्भुराम श्रेष्ठ, स्नेहलता श्रेष्ठ, साहना प्रधान आदिले गरेका थिए ।
जनताद्वारा गरिएको यही पहिलो जनआन्दोलनका कारण तत्कालीन जहानियाँ राणा शासक पद्मशम्शेर राणाले सुधारको कदम चाल्ने प्रयास गरेका थिए । तर, पद्मशम्शेरको उक्त कदम जनताका आँखामा छारो हाल्ने मात्र थियो ।
पुष्पलाल मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शन ठान्थे । यही दर्शनलाई आत्मसात् गर्दै उनले २००६ सालमा भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका हुन् । पुष्पलालले नेपालमा साम्यवादी विचारधाराको व्यापक प्रचारप्रसार गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नेपाली भाषामा अनुवाद पनि गरे ।
१ पुस २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिशु प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेपछि पुष्पलाल पनि अन्य नेतासँगै भूमिगत भए । त्यसबेला पनि पुष्पलालले चारैतिर छरिएका कम्युनिस्टहरूलाई भेला गराई तेस्रो महाधिवेशन गराए ।
भनिन्छ, गंगालाललाई गोली हानी मार्नुअघि भद्रगोल जेलमा भेट्न जाँदा भाइ पुष्पलाललाई गंगालालले भनेका थिए रे, ‘माहिला, मैले प्रजातन्त्रका निमित्त बालेको दियोलाई तैँले प्रज्वलित गर्नेछस् ।’ दाजु गंगालालको यही प्रेरक शब्दले नै पुष्पलाललाई नेपाली राजनीतिमा सक्रिय हुन प्रेरित गरेको उनका निकटस्थहरू बताउँछन् ।
पुष्पलालसँग नजिक रहेर काम गरेका पुराना वामपन्थी नेता मोदनाथ प्रश्रितले पुष्पलाललाई ‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुरु गर्ने र एउटा उचाइमा पुर्‍याउने’ श्रेय दिएका छन् ।
स्पष्ट नीति र कार्यक्रमसहित कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिशा दिन सक्ने पुष्पलाल नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका आदर्श व्यक्तित्व भएको उनको भनाइ छ ।
आजसम्मको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा पुष्पलालजत्तिको संघर्षशील, निस्वार्थी र जिम्मेवार नेता नदेखेको प्रश्रितको भनाइ छ ।
‘उनी एक कुशल राजनीतिक सङ्गठक र विचारकसमेत हुन् । नयाँ जनवादी क्रान्तिमार्फत् मुलुकमा आमूल परिवर्तन सम्भव छ भन्ने उनको मान्यता थियो’, प्रश्रितले भनेका छन् ।
बीसको दशकपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा टुटफुट सुरु भयो । त्यो क्रमले आजसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ ।
पुष्पलालको सपना यस्तो नभएको पुष्पलालसँग सङ्गत गरेका पुराना वामपन्थी नेताहरू बताउँछन् । पुष्पलालको नयाँ जनवादी क्रान्तिमार्फत् समग्र मुलुक र मुलुकवासीको उन्नति, प्रगति हुन सक्छ भन्ने मान्यता रहेको र यसका लागि कम्युनिस्टभित्र मात्र होइन, कांग्रेससँग पनि एकता र सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने धारणा रहेको उनीहरूको मत छ ।
पुष्पलालसँग लामो सङ्गत गरेका अर्का वामपन्थी नेता लोककृष्ण भट्टराई पनि पुष्पलाललाई नेपाली राजनीतिक इतिहासका एक जना अनुकरणीय नेता मान्छन् । पुष्पलाललाई सादा जीवन र उच्च विचारका धनी मान्छन् उनी ।
श्रमिक, उत्पीडित र किसानका हितमा सधैँ सोचिरहने पुष्पलाल सम्पूर्ण जीवन देश र देशवासीका नाममा समर्पण गर्ने आदर्श नेता भएको उनको बुझाइ छ ।
आजसम्म नेपाली समाज जातपात, उँच-नीचको द्वन्द्वमा र चपेटामा फसेको छ तर पुष्पलाल कहिल्यै पनि जातपातको पक्षमा थिएनन् । जातपातले नेपालीको हित गर्दैन भन्ने कुरा उनलाई राम्ररी थाहा थियो ।
‘वर्गको सङ्घर्षबाट जातमा झरेपछि न देश, न जनताको हित हुन्छ भन्ने धारणा उनको थियो’, प्रश्रितको भनाइ छ, ‘उनले यसै कारण हुन सक्छ, आफ्नो नामका पछाडि जात जनाउने थर राख्न चाहेनन् ।’
तात्कालीन नेपाली समाजलाई विविध कोणबाट हेर्ने र त्यसको सही विश्लेषण गरी समाजलाई समृद्धिको मार्गमा लैजानका लागि वैज्ञानिक विचारधाराको अनुसरण गर्न प्रेरित गर्ने पुष्पलालका विचार र मान्यताबाटै आजको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढेको उनको बुझाइ छ ।
तत्कालीन नेपाललाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेसिक भनेर विश्लेषण गर्ने पुष्पलाल कति दूरदर्शी थिए भन्ने कुरा सोही बेलाको उनको निचोड आजसम्म देखिनुले पुष्टि गर्छ । आज पनि नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेसिक अवस्थाबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
आजका दिनमा समेत नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालको वर्तमान परिवेशबारेको विश्लेषण लगभग पुष्पलालकै धारणासँग मिल्न जानु पुष्पलालको दूरदर्शिताको उदाहरण हो ।
नयाँ जनवादी क्रान्तिको वकालत गर्ने पुष्पलाल नेपाली कम्युनिस्टहरूको लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्थे । जनअधिकारको रक्षार्थ सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिमा एकता र सहकार्य आवश्यक भएको कुरामा उनी प्रष्ट थिए । राजनीतिक शक्तिहरूको उद्देश्य नै देश र जनताको कल्याण भएकाले यस कार्यका लागि कतिपय कुरामा सम्झौता र सहकार्य फरक विचार राख्नेहरूसँग पनि गर्न सक्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
दोस्रो महाधिवेशन २०२२ पश्चात् कम्युनिस्ट नेताहरूबीच नै वैचारिक विभेद सुरु भयो । कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू केशरजंग रायमाझी र तुलसीलाल श्रेष्ठसँग पुष्पलालका विचार बाझे । यहीँबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फुटको सुरुवात भयो । यो क्रम ३० को दशकयता नराम्ररी बढेर गयो । नेपाली कम्युनिस्टहरू अनेकौँ टुक्रामा फुटे ।
अनेक नामका कम्युनिस्ट पार्टी खुले तर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादचाहिँ उनीहरूका सिद्धान्तमा रही रहे । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यस्तो फुटलाई कतिपयले बरमझियाको बाजेको पेडा पसल जस्तो पनि भनेका छन् अर्थात् ‘बाजेको पेडा पसल’ वा ‘कम्युनिस्ट पार्टी’चाहिँ झुण्ड्याउनै पर्ने ।
पुष्पलालका आदर्श र विचारलाई कागजमा सीमित गरेर अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन व्यक्तिकेन्द्री, सत्ताकेन्द्री बन्न पुगेको वामपन्थी आन्दोलनका अगुवाहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । यस्तो लाग्छ कि यदि पुष्पलाल आज जीवित थिए भने उनी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमानलाई देखेर के ठान्थे होला ? कति दुःखी र विक्षिप्त बन्थे होला ?
७ साउन २०३५ मा भारतको नयाँ दिल्लीको एउटा अस्पतालमा उपचार गराउँदै गर्दा नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिका शीर्ष पुरुष, राणाविरोधी आन्दोलनका कुशल नेता, पञ्चायतविरोधी अभियानका जिम्मेवार व्यक्तित्व पुष्पलाल श्रेष्ठको निधन भयो ।
तर, आज पनि पुष्पलाल नेपाली राजनीतिको शीर्ष स्थानमै छन् । उनले नेपाल र नेपाली जनताको मुक्तिका निम्ति गरेको सङ्घर्ष र दिएको योगदानको नेपाली राजनीतिक इतिहासले उच्चमूल्याङ्कन र सम्मान गरिरहेको छ, गरिरहनेछ ।
उसो त उही बेला मुलुकमा गणतन्त्रको वकालत गर्ने नेता हुन् पुष्पलाल । उनी आफूलाई भेट्न आउनेहरूलाई आफैँ खाना बनाएर खुवाउँथे, भाँडा आफैँ माझ्थे । भट्टाराईका अनुसार उनलाई भेट्न आउनेलाई घुम्न पठाउँथे र आफू खाना बनाउन थाल्थे । ‘उनी बुर्जुवा कम्युनिस्ट थिएनन्, सच्चा कम्युनिस्ट थिए’, भट्टराई भन्छन्, ‘विश्वमै उन्नत र नेतृत्वदायी मुलुक निर्माणको उनको सपना आजसम्म साकार हुन सकेको छैन ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १५, २०७७, ११:४४:००
ओली सत्ता सङ्कटका कारक
कमजोर शासकीय बौद्धिक स्तर
तिमेरुलाई क्यै था’ छैन क्या साथी हो !